Tambajotran-jiolahy ravan’ny polisy: voasambotra ry Pisokely, mpanao fanafina mitam-piadiana | NewsMada
Tambajotran-jiolahy malaza amin’ny fanafihana mitam-piadiana mahery vaika tokoa ity ravan’ny polisy tao Toamasina, afakomaly ity. Izany Marolahy Julien, fantatry ny maro amin’ny solon’anarana hoe i Pisokely izany no lehibeny.
Ny anarany fotsiny no Pisokely fa raha ny zava-bitany tena Pisobe mihitsy! Niantomboka ny alin’ny talata teo ary nitohy ny alarobia ny fifanenjehan’ny polisy sy ireto andian-jiolahy ireto. Nanemitra ny fokontany maro ao an-dRenivohitr’i Toamasina ny fifanenjehana, toy ny tao amin’ny fokontany Tanambao fahadimy, Ankirihiry, Andranomadio ary hatrany Ambalamanasa izay tena faritra mena amin’ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika. Nahitam-bokany, araka izany, ny ezaka vitan’ireo polisy, nandritra ny fifanandrinana tamin’ireto jiolahy raindahiny ireto. Azo sambo-belona Rafanomezantsoa Tata, 28 taona, Marolahy Julien, 28 taona, Rakotondrasoa Jean, 25 taona, Rakotondrazafy Lydjé, 18 taona ary Rakotondrasoa Jean de Dieu, 38 taona, manam-pahaizana manokana momba ny fanefena basy.
Nitifitra sinoa tao Ambolomadinika…
Nohamafisin’ny polisy hatrany fa i Pisokely no tena atidohan’ny fanafihana mitam-piadiana, na ny fanendahana sy ny fandrobana ao Toamasina. Araka ny fanazavan’ny kaomisera, Razafindahy Manitra Fleurys, ireo jiolahy manam-pahaizana manokana momba ny fanefena basy ireo no tompon’antoka tamin’ny fitifirana ilay teratany sinoa tao Ambolomadinika Toamasina, ny fiandohan’ity taona 2018 ity nahaverezana vola 20 tapitrisa Ar. Efa nifanenjehan’ny polisin’ny Fip tao Ambalamanasa izy roa lahy lehiben’ireto andian-jiolahy ireto, saingy tafaporitsaka hatrany, kanjo izao tratra izao ihany. Nanamafy hatrany ny polisy amin’ny tokony hametrahana andrimasom-pokonolona isam-pokontany ao Toamasina.
Ilaina tokoa ny fisian’ny andrimasom-pokonolona miara-miasa amin’ny mpitandro filaminana, saingy miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika hatrany ny jiolahy ka izay ny mahatonga ireo olona miraviravy tanana indraindray satria hiady amin’ny basy mahery vaika?